Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.1.3 Non-Waxyeelo
Cabbiraad waa wax badan ka yar tahay in la beddelo dhaqanka ee ilaha xogta weyn.
Mid ka mid caqabad ku ah cilmi bulshada waa in dadka bedeli kartaa dhaqankooda marka ay og yihiin inay la arkay by cilmi. Saynisyahano Social guud wac isbedelka dhaqanka this jawaab u falcelin cabbirka cilmibaadhe (Webb et al. 1966) . Mid ka mida xogta weyn in cilmi-badan oo ka heli balanqaaday waa in ay ka qaybgalayaashu guud ahaan aan ka warqabin in xogta ay la qabsadeen ama ay noqdaan si bartayba ururinta xogta this in aan mar dambe badala dabeecadooda. Maxaa yeelay, iyagu waa non-Waxyeelo, oo sidaas daraaddeed, ilo badan oo xogta weyn waxaa loo isticmaali karaa si ay u bartaan dhaqanka in aan la atsan in cabbirka sax hore. Tusaale ahaan, Stephens-Davidowitz (2014) loo isticmaalo baahsanaanta ee shuruudaha cunsurinimo in weydiimo search engine si loo cabbiro animus jinsiyadeed ee gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka. Dabeecadda non-Waxyeelo iyo weyn (eeg qaybta hore) xogta search karti cabbiraadda in uu noqon doono adag la isticmaalayo habab kale, sida sahan.
Non-falcelin, si kastaba ha ahaatee, ma loo hubiyo in xogta kuwanu waa bartey toos ah ka tarjumaya dhaqanka dadka ama dabeecadaha. Tusaale ahaan, sida mid jawaab u sheegay Newman et al. (2011) , "Ma ahan in aan wax dhibaato ah, waxaan kaliya oo aan u dulqaadan on Facebook." In si kale loo dhigo, inkastoo qaar ka mid ah ilaha xogta weyn waa non-Waxyeelo, ma ay joogaan mar walba xor yahay eexda desirability bulshada , u janjeera ee loogu talagalay dadka si ay u doonayaan in ay isa soo taagaan in sida ugu wanaagsan ee suurto gal ah. Dheeraad ah, sida aan ku tilmaami doonaa dheeraad ah hoos, kuwaas oo ilo xog waxaa mararka qaarkood saamaysay himilooyinka milkiilayaasha madal, dhibaato loo yaqaan Wareeriyay algorithmic (tilmaamay more hoose).
Inkasta oo aan falcelin roon tahay cilmi, raad dhaqanka dadka aan ogolaansho iyo wacyi-kicisaa walaac anshaxa hoose iyo si faahfaahsan looga hadlay Cutubka 6. gadoodaan A dadweynaha ka dhanka ah la-socoshada digital kordhay waxay keeni kartaa nidaamka xogta weyn si ay u noqdaan dheeraad ah oo Waxyeelo muddo, iyo xoog walaac ku saabsan surveillance digital xitaa keeni karta in dadka qaarkood ay isku dayaan in ay doortaan-out of nidaamka xogta weyn oo gebi ahaanba, sii kordhaya walaaca ku saabsan non-representativity (tilmaamay more hoose).
Saddexdan guryaha wanaagsan xogta weyn bulshada cilmi-weyn, had-on, iyo non-Waxyeelo-guud kici maxaa yeelay ilaha xogta aan la abuuray by cilmi cilmi. Haddaba, waxaan soo jeedin doonaa in toddobadii guryaha ilaha xogta weyn in ay yihiin xun cilmi. Astaamahani waa sidoo kale u muuqdaan in ay kici sababtoo ah xogta this aan la abuuray by cilmi cilmi.